शिक्षण अस्पताल – Himalaya Television
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ११ महिने शिशुको सफल कलेजो प्रत्यारोपण
१ चैत २०७७ काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ११ महिने शिशुको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरुले ८ घण्टा लगाएर गएराति कलेजो प्रत्यारोपण गरेका हुन् । प्रत्यारोपणका लागि ती बालकलाई उनका ३५ वर्षका बाबुले कलेजो...
डा. केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षण अस्पतालमा कांग्रेसको धर्ना
१९ असोज, २०७७ काठमाडौं । मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज शिक्षण अस्पतालमा धर्ना दिएको छ । केसी अनशन बसेको २२ दिनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालसहितको टोलीले...
डा. केसीको अनशनमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका आवासीय चिकित्सकको ऐक्यबद्धता
९ असोज, २०७७ काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका आवासीय चिकित्सकले डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरुले अनशनरत डाक्टर केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै आजदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम सुरु गरेका छन् । डाक्टर केसी अनशन बसेको १२...
डा. गोविन्द केसी काठमाडौंमा, शिक्षण अस्पताल जान चाहे पनि ट्रमा सेन्टर लगियो (भिडियोसहित)
६ असोज, २०७७ काठमाडौं । जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं आएका अनशनरत डा। गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जवर्जस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको छ । नेपालगन्जबाट बुद्ध एयरको विमानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनासाथ डाक्टर केसीलाई प्रहरीले एम्बुलेन्समा हालेर जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको हो ।...